Bit By Bit - Mass mmekota - 5.5.6 Final imewe ndụmọdụ
Tụkwasị na nke a 5 n'ozuzu imewe ụkpụrụ, m ga-amasị enye abụọ ọzọ iberibe ndụmọdụ. Akpa, ozugbo mmeghachi omume na ị nwere ike izute mgbe ị gwa Abigel a uka mmekota ngo bụ "Ọ dịghị onye ga-ekere òkè." N'ezie ahụ ka ọ. N'ezie, enweghị òkè bụ nnukwu ize ndụ na uka mmekota oru ngo na-eche ihu. Otú ọ dị, nke a n'uche ya emekarị n'esite na-eche echiche banyere ọnọdụ ahụ na-ekwesịghị ime. Ọtụtụ ndị na-amalite na onwe ha na-arụ ọrụ: "M na-eji ọrụ n'aka; M ga-eme nke ahụ. Na, amaghị m onye ọ bụla nke ga-eme nke ahụ. Ya mere, o nweghị onye ga-emeli ya. "Kama malite na onwe gị na-arụ ọrụ, Otú ọ dị, ị kwesịrị ị na-amalite na ndị nile bi n'ime ndị jikọọ na Ịntanetị na ọrụ ya. Ọ bụrụ naanị 1-in-a-nde ndị mmadụ a na-ekere òkè, mgbe ahụ gị na oru ngo nwere ike ịbụ ihe ịga nke ọma. Ma, ọ bụrụ na naanị 1-in-a-ijeri mmadụ na-ekere òkè, mgbe ahụ, gị na oru ngo ga-eleghị anya akụọla afọ n'ala. Ebe ọ bụ na anyị nsinammuo adịghị mma ịmata ihe dị iche otu-in-a-nde na otu-in-a-ijeri, na anyị ga-ekweta na o siri nnọọ ike ịmata ma ihe oru ngo ga-n'ịwa zuru ezu òkè.
Iji mee ka a a bit ọzọ ihe, ka anyị laghachi Galaxy Zoo, ndị mmadụ mgbakọ mbara igwe oru ngo tụlere ná mmalite isiokwu a. Were ya Kevin Schawinski na Chris Linton, abụọ-enyocha mbara igwe na-anọdụ a ụlọ mmanya na Oxford-eche echiche banyere Galaxy Zoo. Ha na-agagh guessed-na dịghị mgbe ike guessed-na Aida Berges-a ọnụnọ-na-ulo nne nke 2 bụ onye bi na Puerto Rico-ga-ejedebe edida ọtụtụ narị ụyọkọ kpakpando a izu (Masters 2009) . Ma ọ bụ, tụlee ihe banyere Devid Baker, ndị biochemist-arụ ọrụ na Seattle emepe emepe Foldit. Ọ na-apụghị ịtụwo anya na ọ dị onye si McKinney, Texas aha ya bụ Scott "akpụkpọ ụkwụ" Zaccanelli, bụ ndị rụrụ ọrụ ehihie dị ka a asịwo n'ihi na a valvụ factory, ga-anọ ya ná mgbede mpịachi ndi na-edozi, emecha ebili ka a ọnụ ọgụgụ 6 ranking on Foldit, nakwa na Zaccaenlli ga-, site na egwuregwu, n'okpuru a haziri maka a ọzọ mụ variant nke fibronectin na Baker na ya otu hụrụ otú ná ekwe ha kpebiri synthesize ya na ha na ụlọ nyocha (Hand 2010) . N'ezie, Aida Berges na Scott Zaccanelli bụ gbara gharịị, ma nke ahụ bụ ike nke Internet: na ọtụtụ ijeri mmadụ, ọ bụ ahụkarị ga-ahụ gbara gharịị.
Nke abụọ, nye a isi ike na ịkọ òkè, m ga-amasị-echetara gị na-eke a uka mmekota oru ngo pụrụ ịbụ ize ndụ. Ị nwere ike itinye ego mgbalị dị ukwuu-ewu a usoro na ọ dịghị onye ga-chọrọ iji. Dị ka ihe atụ, Edward Castronova-a na-eduga na-eme nnyocha na ubi nke akụnụba nke kọmputa, burugodị na a Onyinye nke $ 250,000 si MacArthur Foundation, na-akwado site na otu ìgwè ndị na mmepe-nọrọ fọrọ nke nta afọ abụọ na-agbalị iru a mebere ụwa n'ime nke ọ pụrụ iduzi aku nwere. N'ikpeazụ, dum mgbalị mebiri; ọ dịghị onye chọrọ iji Castonova si mebere ụwa (Baker 2008) .
Nyere anya banyere òkè, nke bụ ike iwepụ, m atụ aro na ị na-agbalị iji dabere mmalite-elu usoro (Blank 2013) :-ewu mfe prototypes eji anya-na-shelf software na-ahụ ma ọ bụrụ na i nwere ike na-egosi viability tupu etinye na nza nke omenala software mmepe. Yabụ, mgbe ị na-amalite pilot ule, gị na oru ngo ga--na-ekwesịghị-ele anya dị ka polished dị ka Galaxy Zoo ma ọ bụ eBird. Ndị a oru ngo, dị ka ha na-now, bụ ihe ndị afọ nke mgbalị nnukwu ìgwè. Ọ bụrụ na gị na oru ngo a ga-ada-na na bụ ezigbo ekwe omume-ahụ ị chọrọ ada ngwa ngwa.